Maa ụlọikwuu | Nleta Hultsfred
Họrọ ọkacha mmasị gị, kpoo ụrọ ahụ wee bịa ebe a!
Ọ bụrụ n’ịjegharị na adọkpụ, mọbụọma ma ọ bụ ime atụmatụ ịma ụlọikwuu n’oge ọnụnọ gị, enwere ọtụtụ ogige dị iche iche - nke dịdebere ọdọ, ebe nkiri na nke etiti.
Nwa ehi yinye
Ebe a na-adọba ụgbọala na ogige Kalvkätte nwere mmiri, WC na ebe mkpofu.
N'etiti etiti ọdọ mmiri na mkpagharị, ọdụ ahụ nwere ebe anọ na-adọba ụgbọala. Free guzo otu abalị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịgba egwu, a na-akpọga gị Camping Hultsfred
Lee ị bi na ọmarịcha ele Lake Hulingen! Are nọ nso n'akụkụ osimiri, akụrụngwa na cafe. A njem kilomita abụọ na-aga n'okporo ụzọ ahụ
North nke Målilla bụ ebe ndị njem na Hesjön maa ụlọikwuu. Enwere ebe a na-adọba ụgbọala maka ndị njem na ụlọ mkpagharị, yana ebe ụlọikwuu dị iche. Ebe a na-adọba ụgbọala handicap. Si na ụgbọala ụgbọala a customizable ụzọ ala
Ebe a na-adọba ụgbọala maka ndị njem, ụgbọ ala na ohere ị ga-ama ụlọikwuu N'ebe a, enwere ụlọ mposi nwere nkwarụ na mmiri ọkụ na ebe mgbanwe. Mpaghara amịkpọ anụ na ihe dịka 900 mita ọzọ